Na-ejuputa Factlọ Ọrụ Machinelọ Ọrụ, Ndị Na-eweta Ihe - China Na-ejuputa Ndị Na-emepụta Ngwaọrụ
FAYGO UNION GROUP nwere alaka ụlọ ọrụ 3. Otu bụ FAYGOBLOW nke na-emepụta ma na-eme igwe ịkpụzi igwe maka PET, Pee wdg FAYGOBLOW nwere ikikere 5 nke mepụtara, yana ụdị ikike ikikere 8. FAYGO PET igbu ịkpụzi igwe bụ otu nke kasị na kasị ike-oru oma imewe na ụwa. Factorylọ ọrụ nke abụọ bụ FAYGOPLAST, nke na-eme igwe extrusion plastik, gụnyere paịpụ extruding plastic, profaịlụ extruding line. Karịsịa FAYGOPLAST nwere ike na-enye elu na-agba ruo 40 m / min Pee, PPR anwụrụ akara. Factorylọ ọrụ nke atọ bụ FAYGO RECYCLING, nke na-enyocha teknụzụ ọhụụ na karama plastik, na-emegharị ihe nkiri na pelletizing. Ugbu a FAYGO RECYCLING nwere ike ịbụ 4000kg / hr. PET na-asa ahịhịa, na 2000kg / hr plastic film saa line
Nkọwa maka igwe 5 galọn na-ejuputa igwe Igwe a na-ejuputa mmiri na-emepụta galọn mmiri na-egbuke egbuke, nke ụdị (b / h) bụ: ụdị 100, ụdị 200, ụdị 300, ụdị 450, ụdị 600, 90 ...
5L / 10L Rotary akpaka Bottle ndochi Machine
Akpaaka 5L Na-ejuputa Igwe 1. Na-akpaghị aka Bottling 3 na 1 ịnweta / ọcha Mmiri Na-ejuputa Igwe na-etinye Rinsing / Filling / Capping 3-in-1 technology, PLC control, Touch Screen, a na-eme ya ...
Igwe a na-a fillingụ ihe ọ fillingụverageụ na-ekpuchi ihe ọ -ụ -ụ-Njirimara 1. kinddị ihe ọverageụ beụ a na-a carbonụ ihe ọ carbonụ carbonụ na-agwakọta igwe, na-ejuputa ma na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'otu unit.
A na-aụ mmiri na-ejuputa igwe nke a CGF Akpaaka Na-ejuputa-a na-etinye 3-in-1 Water Filling Machine iji mepụta mmiri ịnweta mmiri, mmiri dị ọcha, mmanya na-egbu egbu na ndị ọzọ na-abụghị g ...
Ntughari Ngwaahịa Nke a CGF Wash-ndochi-capping 3-in-1unit: A na-eji Machinery Beverage iji mepụta ihe ọ juiceụ bottụ PET na karama ndị ọzọ na-abụghị gas. CGF Na-ejuputa na-ekpuchi 3-in-1unit: Bevera ...
Ntughari Ngwaahịa Igwe a bụ igwe 2-in-1 monobloc na-ejuputa mmanụ. ọ nabatara ụdị ndochi piston, ọ nwere ike ịdị maka ụdị mmanụ niile, mmanụ oliv, sunfl ...